အမေရိကန်နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေး စာချုပ်အသစ်ကို ဂျပန်လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း အမေရိကန်နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေး စာချုပ်အသစ်ကို ဂျပန်လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး
WASHINGTON, DC - JUNE 07: Japanese Prime Minister Shinzo Abe looks at U.S. President Donald Trump atajoint news conference in the Rose Garden at the White House June 7, 2018 in Washington, DC. Trump and Abe discussed the upcoming U.S.-North Korea summit. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
အမေရိကန်နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေး စာချုပ်အသစ်ကို ဂျပန်လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး
ဂျပန်အထက်လွှတ်တော် အမတ်တွေဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်သစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စတင်ဆွေးနွေးနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးက လူဦးရေကျဆင်းနေတာနဲ့ အားကောင်းတဲ့ စီးပွားရေးမှာ ပါဝင် လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ သဘောတူညီချက် လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တစ်ခု ဖန်တီးရေးမှာ ဂျပန်က ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဇုန်မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျုံးဝင်တဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက် (TPP)၊ ဥရောပနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စီးပွားရေးမိတ်ဖက် သဘောတူ စာချုပ် EPA၊ ဂျပန်အမေရိကန် သဘောတူညီချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဂပွနဟြာ နိုငငြံရဲ့ အကွိုးစီးပှားတှနေဲ့ ကိုကညြီတဲ့ စီမံဆောငရြှကခြကွတြှကေို ဆကလြကြ လုပဆြောငသြှားမှာ ဖှဈတယလြို့လညြး ဂပွနဝြနကြှီးခွုပကြ ပှောပါတယြ။ လကရြှိ လှှတတြောြ အစညြးအဝေး အတှငြးမှာ အဲဒီ ကုနသြှယရြေး သဘောတူညီခကွအြပေါြ လှှတတြောရြဲ့ အတညပြှုခကွရြဖို့ ဂပွနအြစိုးရက မွှောလြင့ထြားပါတယြ။
WASHINGTON, DC – JUNE 07: Japanese Prime Minister Shinzo Abe looks at U.S. President Donald Trump atajoint news conference in the Rose Garden at the White House June 7, 2018 in Washington, DC. Trump and Abe discussed the upcoming U.S.-North Korea summit. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
အမရေိကနျနဲ့ ခြုပျဆိုထားတဲ့ ကုနျသှယျရေး စာခြုပျအသဈကို ဂပြနျလှှတျတောျမှာ ဆှေးနှေး
ဂျပန်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အတွင်းမှာ အဲဒီ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်အပေါ် လွှတ်တော်ရဲ့ အတည်ပြုချက်ရဖို့ ဂျပန်အစိုးရက မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
Previous articleမြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်မှု မြန်မာက အဆင့် ၄ မှာ ရှိနေ
Next articleစိုက်ပျိုးစရိတ်နဲ့ ပေါက်ဈေးမမျှလို့ ဝါစိုက်တောင်သူတွေ အရှုံးပေါ်